Archive du 20180912
Fanarenana ny Firenena Dadavalo no mahafeno ny fepetra
Maro ny fihetsiketsehana tetsy sy teroa tato anatin’ny roa volana izay, tafiditra ao anatin’ilay pre-campagne izay ny fanononana ny teny hoe :
Fitorian-dry Tabera Tsy mahefa hitsara ny fitsarana an-tampony
Nitondra ny valin’ny fitoriana nataon’i Tabera Randriamanantsoa ny eo anivon’ny filankevi-panjakana, tetsy amin’ny fitsarana an-tampony Anosy omaly.
Thierry Rakotonarivo “Tsy maintsy manana mpitambola ny kandidà”
Mba ahafahana manara-maso akaiky sy mamaritra ny vola ampiasaina mandritra ny fifidianana dia tsy maintsy manendry ny mpitambolany ny kandidà tsirairay avy, araka ny voalazan`ny lalàna.
Antoko HVM « Vonona hanaiky valim-pifidianana ! »
Taorian’ny fametraham-pialan’ny filoham-pirenena teo aloha, Hery Rajaonarimampianina, hoy ny filohan’ny antoko HVM ao Antsiranana, ny loholona Amido, dia vonona izahay ary miomana tanteraka amin’ny fiatrehana fifidianana.
Antenimierandoholona Andriambololona Mananjara no filoha vonjimaika
Notendren'i Rivo Rakotovao ho filohan'ny Antenimierandoholona hisolo toerana azy vonjimaika i Andriambololona Mananjara, loholona avy eto Analamanga ihany. Ny fanapahan-kevitra laharana faha-30-HCC / D3 amin'ny 7 septambra 2018 dia manendry ny filohan'ny Antenimierandoholona ho filoha mpisolo toerana hitantana ny firenena, araka ny andininy faha-2.
Filankevi-panjakana Nametraka fitoriana ihany koa ny K10
Nahatsiaro tena ho nailika tao anatin’ny fifidianana ireo olona miisa folo tarihin’i Alain Mahavimbina nanatitra antontan-taratasy firotsahan-kofidiana ho filoham-pirenena teny amin`ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) saingy tsy nankatoavina.
Kandida ho filoham-pirenena Be no tia kely
Efa tsy miafina intsony fa maro amin’ireo milaza azy ho mpanao politika eto Madagasikara no milalao ny fiainam-pirenena. Mampiharihary izany voalohany ny isan’ireo kandida ho filoham-pirenena.
Omega Jean Julien Aoka izay ny famitahana !
Manao ranolava ny fanehoan-kevitra manoloana ny fahantrana iainan’ny vahoaka Malagasy sy ny fahavoazana ara-toerana diavin’i Madagasikara.
Aiza eto Gasikara re no mba tsy mitaintaina ? Toerana manao ahoana no tsy atahorana ny aina ? Na ao an-trano maka aina na eny an-dalana mandeha Toa tsy misy ieren-doza izay toerana haleha.
Fikambanan’ny terak’i Bara Leo ny fanaparam-pahefana ataon’ny Zandary
Nampiaka-peo ry zareo avy eo anivon’ny FIkambanan’ny TErak’i BAra (FITEBA) omaly tetsy amin’ny biraony etsy Ampefiloha fa leo ny fanamparam-pahefan’ireo zandary sasany any amin’ny faritra misy azy ireo.
Minisiteran’ny serasera Misavorovoro
Tokony ho notanterahina omaly ny fifamindram-pahefana teo amin’ny talen’ny kabinetra teo aloha, eo anivon’ny minisiteran’ny serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrimpanjakana etsy Nanisana, Dr Dieudonné Rakotoaridina sy ny vaovao
Claudine Razaimamonjy Nafahana madiodio ?
Niteraka resabe nanomboka omaly hariva ilay famotsorana an-dRamatoa Razaimamonjy Claudine, voarohirohy noho ny resaka kolikoly ka taorian’ny fanadihadiana nataon’ny Bianco no nisamborana azy.
Valala an-karona hatrany
Tsy mbola ao anatin’ny propagandy isika izao, saingy efa mandeha ny don-tany sy kapo-tandroka samihafa ho an’ny samy kandida.
Fanadinana bakalorea Ho hentitra ny fanaraha-maso
Hotanterahina manomboka ny alatsinainy 17 hatramin’ny alakamisy 20 septambra ho avy izao ny fanadinam-panjakana an-tsoratra Bakalorea eto Madagasikara.
« Festival Rodorodo » Hifamotoana ao Manjakandriana ny Zanak’i Vakiniadiana
Hotanterahina ao amin’ny renivohitry ny distrikan’i Manjakandriana ny 28-30 septambra izao ny andiany voalohany amin’ny « Festival Rodorodo”,
Vidin-tsolika Nisondrotra indray
Hiakatra manomboka anio alarobia 12 septambra indray ny vidin’ny solika eny amin’ny mpaninjara ka lasa 3500 ariary ny litatry ny gazoala , 4150 ariary ny lasantsy ary 2580 ariary kosa ny solika fandrehitra.
Mpandraharaha misehatra amin’ny angovo Hanome vahaolana ny mpitondra
Nampahafantarina omaly fa hisy ny atrikasa goavana izay ho tanterahin-drizareo avy eo anivon’ny fivondronan’ny mpandraharaha misehatra eo amin’ny tontolon’ny angovo na GBPEM ny 14 sy 15 septambra izao etsy Andrefan’Ambohijanahary.
Fandotoana tanàna Efa lasa aretin’ny Malagasy
Tsy Antananarivo ihany fa saika manerana ny nosy ankehitriny dia maloto ny tanàna. Nikolay avokoa ireo mponina avy niala sasatra nohadihadiana.